आखिर काठमाण्डाैं उपत्यकामा जे नहुनु थियो त्यहि भैदियो… – PathivaraOnline
Home > समाचार > आखिर काठमाण्डाैं उपत्यकामा जे नहुनु थियो त्यहि भैदियो…
आखिर काठमाण्डाैं उपत्यकामा जे नहुनु थियो त्यहि भैदियो…
admin July 8, 2021 समाचार	0
काठमाडौँ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को जोखिम बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । मुलुकमा दोस्रो लहरको कोभिड–१९ उच्च बिन्दुमा पुगेर सङ्क्रमण क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहँदा पछिल्ला केही दिनको तथ्याङ्कले बढ्ने आशङ्का छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सङ्क्रमण दरमा वृद्धि भइरहेकाले जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी यतिखेर सर्तक हुन सकिएन भने गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने बताउनुहुन्छ । “जोखिमयुक्त हुँदाहुँदै जनजीवन सहजीकरण गर्न निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएको हो, सङ्क्रमण सबै सकियो भनेर होइन”, डा. अधिकारीले भन्नुभयो, “अझै हाम्रो व्यवहार, शैली परिवर्तन गर्नु हुन्न, सबै मापदण्डको पूर्ण पालनामा नचुकौँ ।”
मन्त्रालयले अघिल्लो महिनामा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी तेस्रो लहरको सङ्क्रमण आउन सक्ने र त्यस समयमा बालबालिका बढी जोखिममा पर्नसक्ने आँकलन गर्दै अस्पताललाई आवश्यक शय्या व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । जनस्वासथ्यविद् डा .रविन्द्र पाण्डे प्रजाति नै परिवर्तन भएर तेस्रो लहर आउनसक्ने भन्दा पनि यही डेल्टा प्रजाति नै वृद्धि हुने अनुमान गर्नुहुन्छ । भारतमा समेत सङ्क्रमण बढ्न थालेकाले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालमा पर्ने वितगको उदाहरण छ ।
जोखिम रोक्ने मुख्य उपाय भनेको भिडभाड रोक्नु र मानिसमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गराउनु हो । उहाँ भिडभाड हुने ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी आवश्यक परे जरिवाना नै लगाउन सुझाव दिनुहुन्छ । “ठाउँठाउँमा जनचेतना पनि आवश्यक छ, थाहा हुँदाहुँदै पनि मासिन सचेत भएका छैनन्, आफूलाई नपरेसम्म नजरअन्दाज गर्ने हाम्रो सोच छ, त्यो सोच बदल्न जरुरी छ”, डा. पाण्डेले भन्नुभयो ।
नेपालमा युवाले खोप नलगाएका कारण उनीहरूसमेत जोखिममा छन् । बालबालिका मात्रै जोखिममा पर्ने होइन । जुनजुन क्षेत्र चलायमान गरियो । त्यसमा नीति, नियम तथा मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन जरुरी हुन्छ । यातायत, मालपोत, कर कार्यालमजस्ता क्षेत्रमा एकदम भिड छ, त्यो भिड कसरी कम गर्ने ? गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
सरकार र नागरिक मिलेर आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्यौँ भने नियन्त्रण सम्भव छ, नत्र अफ्ठेरो अवस्था आउन सक्ने उहाँको ठम्याइ छ । अहिले भारतमा समेत फेरि सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ । भारतमा बढ्नु भनेको नेपालमा पनि बढ्ने सङ्केत हो ।संक्रमको पहिलो लहर र दोस्रो लहर आउँदा पहिले भारतमा आएपछि त्यसको केही हप्तामा नेपालमा महामारी भएको थियो । डा. पाण्डेले भन्नुहुन्छ, “पुनः जोखिम उच्च देखिएकाले हामीले कतै लापरबाही ग¥यौँ की, समीक्षा गरौँ ।”
कैलालीमा बालक ह त्या प्र करणः दिदीको बयान कुलोको डिलमा लगेर ध क्का दिए
भारतले नेपाललाई दियो ठूलो झट्का !
फेसबुकमा लभ परेर होटल बोलाइएकि युवती आफ्नै … परपछि…
आफ्नै भिनाजुले अविवाहित आमा बनाईदिएपछि…
पेट दुखेर अस्पताल पुगेका युवकको हातमा गर्भवती भएको रिपोर्ट थमाएपछि…
गुडीरहेको गाडी रोकेर गाडी भित्रै चालक र सहचालकले पालैपालो ....